Sun, Aug 19, 2018 | 17:56:14 NST
धरहरा, रानीपोखरी र काष्ठमण्डप तीन वर्षमा सक्ने घोषणा
काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
​तपाईँको प्रदेश र स्थानीय तहले कति बजेट पायो ?
काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले प्रदेशलाई १ खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने भएको छ ।
पाँच वर्षभित्र रोजगारी गर्न विदेश जान नपर्ने गरी देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले विभिन्न कामहरु शुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्ता कामभित्र बेरोजगारको गणना गर्नेदेखि प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने सम्मका कार्यक्रम परेका छन् ।
काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले गरिवहरुलाई सुरक्षित छानोमुनि ल्याउन जनता आवास कार्यक्रमको दायरा बढाउने भएको छ ।
​के–के ल्यायो सरकारले बजेटमा ? हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
​आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत, मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित राखिने
काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।
काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले सुर्तीजन्य उत्पादन र मदिराजन्य बस्तुमा अन्तःशुल्क कर बढाउने भएको छ ।
काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले विभिन्न वस्तुहरुको अन्तशुल्क कर बढाउने भएको छ ।
​बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब : पोहोरको भन्दा ३७ अर्ब बढ्यो
काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले बजेटमार्फत ७ वटा सुरुङमार्ग बनाउने घोषणा गरेको छ ।
​कर्मचारीको तलब बढेन, महंगी भत्ता बढ्यो
काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले कर्मचारीको तलब बृद्धि नगर्ने घोषणा गरेको छ ।
काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले आर्थिक कारोबार बैंकिङ क्षेत्रबाट मात्रै गर्ने उदेश्यले एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै बजेट छुट्याएको छ ।
काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि समाजवाद उन्मुख उद्देश्यसहितको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
​तराईमा खरको छाना भएकालाई जस्तापाता
काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले तराईमा घरको छाना भएका नागरिकलाई जस्तापाता दिने घोषणा गरेको छ ।
काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘भिजिट नेपाल २०२०’ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
काठमाडौं, जेठ १५ – अब हरेक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्य पसल खोलिने भएको छ ।
काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले हरेक प्रदेशमा रंगशाला बनाउने भएको छ ।
काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले वृद्धभत्ता नबढाएर स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरेको छ ।
​इजाजत लिएर मात्र घरजग्गा खरिद बिक्री गर्न पाइने
काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले घरजग्गा खरिद बिक्रीमा कडाई गरेको छ ।